Fotsy iPod 5 taranaka.
Ny iPod dia azo entina mozika jukebox ny orinasa Apple. Ny fitaovana ny fianakaviana iPod hanolotra ny mpampiasa ny tena tsotra ny fomba fampiasana mifototra amin'ny boribory an-tsaha mikasika/bokotra (horonan-taratasy kodiarana), afa-tsy ny iPod shuffle. Ny ankamaroan ' ny iPod toy ny fitehirizana ny mpanelanelana amin'ny tontolo ny kapila mafy, raha ny kely indrindra amin'ny fianakaviana, Nano, ary Shuffle hampiasa flash fahatsiarovana. Fanohanana ny fanarahana ny feo rakitra: Mp3, AAC, WAV, AIFF, Re sy ny Paoma Lossless. Toy ny mozika indrindra jukebox, ny iPod azo ampiasaina ho toy ny tahirin-kevitra store rehefa mifandray amin'ny olona iray solosaina. Ny tantaran 'ny iPod ahitana taranaka roa ny iPod Mini sy dimy niandohan' ny iPod.
Raha ny iPod manana ny mitovy tarehy, ny fitaovana lasa ny in-dimy lehibe fanitsiana (taranaka). Dimy taranaka dia atao hoe ao mba manaraka: voalohany, faharoa, fahatelo, fahefatra sy fahadimy taranaka.
Isaky ny taranaka nifandimby dia namoaka iPod ny hafa habe amin'ny vidiny hafa. Any amin'ny taranaka fahatelo, dia nisy telo modely. Amin'izao fotoana izao Apple navoaka roa ohatra, iray amin'ny kapila mafy haben'ny 30 Gb sy ny kapila mafy ny haben'ny 80 Gb. Araka ny Paoma, 1 Gb ampy ho 250 efatra minitra hira voaaro amin'ny 128 Kbit/s ny endrika AAC (mampiasa ambony matetika ny mpanoratra, ireo hira izay hitondra bebe kokoa ny toerana eo amin'ny kapila mafy). Noho izany, ny iPod 30GB mitazona ny 7,500 hira.
1 iPod taranaka voalohany
2 iPod taranaka faharoa
3 iPod fahatelo-taranaka
4 iPod fahefatra-taranaka
5 iPod Sary: ny voalohany miloko iPod
8 iPod taranaka fahadimy
10 Andinin-tsoratra masina
11 Ny loharanom-baovao
iPod taranaka voalohany[hanova | hanova ny fango]
Nampahafantarina voalohany tamin'ny 23 oktobra 2001. Ny voalohany iPod cost 399$ amin'ny kapila mafy haben'ny 5 Gb. Ny vidiny ihany koa ny nandray ratsy dokambarotra, fa ny iPod mivantana nahazo be dia be ny varotra, sy haingana namela ny hafa MP3 mpilalao izany vanim-potoana, toy ny Nomad Jukebox. Paoma dia nanolotra modely amin'ny kapila 10 Gb Martsa 2002.
Ny Apple natao ny mekanika horonan-taratasy kodiarana sy nanome ny drafitra ho an'ny fananganana ny Synaptics, ny orinasa izay manufactures mikasika fitaovana (touchpad) ho an'ny maro, solosaina findainy tao an-tsena, ao anatin'izany ny Paoma. Ny iPod taranaka voalohany nanana efatra bokotra manodidina ny boribory horonan-taratasy kodiarana.
iPod taranaka faharoa[hanova | hanova ny fango]
Aseho amin'ny 17 jolay 2002 amin'ny kapila mafy habe ny 10 Gb sy 20 Gb. Ny taranaka faharoa soloina ny mekanika horonan-taratasy kodiarana voalohany amin'ny fitaovana, tsy mekanika, fa ny mikasika ny "mikasika wheel", atao amin'ny Synaptics.
Noho ny vaovao kapila mafy ny Toshiba, ny vaovao tanako dia maivana sy manify noho ny teo aloha modely. Ny iPod faharoa-taranaka niaraka tamin'ny iray mitondra ny raharaha, ary manana maso, ary koa no voalohany iPod izay mifanaraka amin'ny Windows, rehefa afaka mampiasa ny HFS, toy ny FAT32.
iPod fahatelo-taranaka[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny 23 aprily 2003 Steve Jobs maneho ny tao amin'ny andian-taranaka fahatelo iPod, kely kokoa noho ny teo aloha ny modely. Amin'ny taranaka fahatelo ny Paoma namoaka 5 modely isan-karazany fahaiza-manao: 10 Gb, 15 Gb, 20 Gb, 30 Gb sy 40 Gb.
Ireo iPod mampiasa ny karazan'ny fifandraisana amin'ny 30-tsimatra izay antsoina hoe ny dock sy lava sy matevina sy lava kokoa noho ny ara-dalàna slot firewire. Izany no mahatonga azy ireo mifanaraka amin'ny iPod Dock fa nisintona ny Paoma ny ny hetsika ao amin'ny iray ihany ny fotoana. Ny iPod Dock dia iray amin'ireo votoatin'ny rehetra ny iPod taranaka, afa-tsy ny mora indrindra, koa amidy misaraka.
Ny taranaka fahatelo nitondra ny mikasika bokotra any ambanin'ny efijery. Vaovao ireo bokotra manana mena atitany jiro fa dia voafehy ao amin'ny toy izany koa ho toy ny seho backlighting, mamela mora ampiasaina ao amin'ny maizina toerana. Ny mikasika fanalahidy izay nanana iPod fahatelo-taranaka miaraka amin'ny horonan-taratasy kodiarana nanao azy tsy manam-paharoa ao fa tsy nafana firenena any ivelany (afa-tsy ny hanao ny bokotra). Izy irery ihany koa no iPod fa tsy manana ny fanalahidy manodidina ny horonan-taratasy kodiarana.
Ny fahatelo-taranaka iPod Apple nijanona mba hamokatra dikan-samy hafa ny Macintosh sy ho an'ny Windows. Rehetra ny iPod tonga avy amin'ny orinasa ny fiara mafy format amin'ny HFS ho an'ny fampiasana ny Macintosh, na ny CD fa tonga ny iPod ny feo Windows dia mety tsy hahita ny fampiharana izay namela azy ireo επαναδιαμορφώσουν ny fiara mafy amin'ny FAT32 mba ho afaka mampiasa azy io amin'ny Windows. Izy ihany koa no voalohany izay nanana fahafahana mifandray amin'ny alalan'ny USB.
Rehefa izany dia mividy avy amin'ny vohikalan'i Apple, ny mpanjifa afaka hack ny andinin-teny roa andalana ho amin'ny indray ny iPod (miaraka amin'ny fanampiny-poana, raha ary ankehitriny izany maimaim-poana). Na modely teo aloha no hita ho tena malaza, ny iPod taranaka fahatelo aseho ny dia ambony varotra.
iPod fahefatra-taranaka[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny volana jolay 2004, ny Paoma dia mampahafantatra ny taranaka fahefatra ny iPod. Lalana vaovao ny dokambarotra nanambara fa Steve Jobs dia ho eo amin'ny fonony ny olana iray ao amin'ny gazety ny Newsweek.
Mazava indrindra isan-karazany ny vaovao iPod dia ny fisian'ny vaovao tsindrio kodiarana , izay nivoaka voalohany tao amin'ny iPod mini. Ny mpampiasa sasany no naneho hevitra momba ny tsindrio ny kodiarana noho ny fanalahidy dia ny tsy jiro, fa ny sisa taminy nahatsikaritra fa amin'ny alalan'ny fametrahana ny fanalahidy eo amin'ny toerana ny efa-points amin'ny faravodilanitra, dia tsy misy intsony mila ny jiro, satria fantany fa ho hitanao isaky ny bokotra mora foana. Paoma dia nilaza fa ny rindrambaiko vaovao, ny iPod afaka milalao mozika nandritra ny 12 ora maninjitra ny tatatra ny bateria. Hafa kely ny fiovana dia ny koa ny safidy ' lalao kisendrasendra hira (shuffle hira) amin'ny tena sakafo, ny fanaovana izany dia mora kokoa ny mampiasa. Taorian'ny fepetra takiana ho an'ny mpampiasa maro ny Paoma tamin'ny 23 febroary 2005 , namoaka firmware hanatsarana, izay nanampy ny safidy vaovao ao amin'ny tena sakafo, ary ny antitra iPod.
Ny iPod ny zafindohalika efa fotsy sy mainty efijery ary navoaka tamin'ny roa modely, ny 20 Gb sy 40 Gb. Izany no thinner kely noho ny teo aloha sy nitondra ny fahafahana anjara-raharaha ny bateria amin'ny alalan'ny USB.
iPod Sary: ny voalohany miloko iPod[hanova | hanova ny fango]
Aseho amin'ny 28 oktobra 2004. Izy io dia manasongadina ny efijery famahana ny 220 x 176, miaraka amin'ny fahafahana haneho ny 65,536 loko, sy ny fahafahana mitahiry sy mijery sary antontan-taratasy, toy ny JPEG, BMP, GIF, ny TIFF sy PNG. Amin'ny milimetatra thinner noho ny monochrome iPod ny zafindohalika, amin'ny fiainana bateria hatramin'ny 15 ora. Navoaka tany am-boalohany ao roa modely, miaraka amin'ny fahafahana ny 40 Gb sy 60 Gb.
Tamin'ny 23 febroary 2005, Paoma nandatsaka ny vidiny ny modely amin'ny 40 Gb fahaiza-manao ary efa nanolotra mbola hafa iPod Sary, miaraka amin'ny fahafahana ny 30 Gb, izay mifanohitra amin'ny ny modely ny 40GB, tsy hita afa-tsy ny USB-tariby sy tsy nahafoy. Nesorina ihany koa ny vidin'ny ny modely ny 60 Gb amin'ny alalan'ny fanesorana avy ny fonosana miaraka amin'ny dock, firewire sy ny mitondra ny raharaha, ary AV telegrama.
Tamin'ny volana jolay 2005 ny Paoma mampiray ny iPod Sary sy fotsiny ny iPod tamin'ny fanajanonana ny varotra ny mainty iPod, sy ny fanomezana ny iPod rehetra ny endri-javatra ny ny iPod Sary tamin'izany vidiny toy ny teo aloha mainty sy fotsy ny iPod. Apple, ary koa isan-karazany ny mpampiasa ny ny iPod, mbola ho voalaza ao amin'ny andian-dahatsoratra ity toy ny iPod ny zafindohalika. Ho an'ny sary fitantanana ny iPod ny mpampiasa mampiasa Mac iPhoto, raha toa ka ny mpampiasa ny Windows, dia afaka mampiasa Adobe Photoshop Rakikira na Singa, ihany koa dia afaka mampiasa ny endri-javatra voafetra amin'ny sary fitantanana ny iTunes.
Avy ny 28 jona 2005 ny iPod dia niaraka tamin'ny USB tariby sy ny lovia. Malaza vokatra fanampiny dia ao amin'ny dock, ny firewire, ny AV tariby mamela ny mpampiasa mba jereo ny sary ao amin'ny tv, ary ny iPod fakan-tsary connector, ny fitaovana izay famindrana ny sary avy amin'ny fakantsary ny iPod.
Ny iPod ny zafindohalika kely kilema izay mahatonga ny tsy miato playback. Misy jiro ao amin'ny faladiany ny earphone, izay afaka mahatsapa ny decoupling ny headset ka nataony tonga dia niato kely ny iPod. Ny indro kely dia ny hoe imbetsaka mahazo ny ratsy famantarana sy mametraka ny iPod tamin'ny fiatoana kely, na dia ny headset dia mbola mifandray. Ity hadisoana ity dia hita kokoa ho an-tsofina avy amin'ny ireo orinasa hafa toy ny Sennheiser, na dia maro ny mpampiasa aterineto no nahatsikaritra fa ny olana mitranga amin'ny écouteur fa hiaraka ny iPod. Inona no mahatonga ny olana avy amin'ny kely ny vy anjara izay hita teo am-pototry ny faladiany ny écouteur, ary miteraka fohy faritra miaraka amin'ny vy indray ny iPod .
iPod U2 Special Edition[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny 28 oktobra 2004 Apple namoaka ny mena-mainty iPod ny zafindohalika amin ' ny anaran iPod U2 Special Edition Manana vatana mainty sy mena tsindrio kodiarana (ny loko ny U2 album, Ahoana no mba Handrava ny Baomba Atomika). Izy koa dia efa voasokitra ny sonia ny mpikambana ao amin'ny tarika indray. Izany dia mirakitra ny tapakila ho an'ny ny iTunes Fivarotana Mozika, ny sanda 50$.
Tamin'ny 28 jona 2005, rehefa Apple nanambara ny union ny ny iPod tamin'ny iPod sary nanampy ny loko efijery sy ny iPod U2, ary mihena ny vidiny ' ny.
iPod Harry Potter[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny septambra 2005 ny fanolorana ny iPod ny zafindohalika miaraka amin'ny fahafahana ny 20 Gb, amin'ny lehibe iray marika eo amin'ny indray ny fangon'ny Hogwarts. Izany modely nitsahatra ny fifamoivoizana noho ny vaovao iPod Harry Potter fahadimy-taranaka. Ny tanako dia aseho miaraka amin'ny fizarana voalohany ny boky peo ny Harry Potter ny iTunes Fivarotana Mozika. Ny hany fomba buy dia amin'ny alalan'ny Internet.
iPod taranaka fahadimy[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny 12 oktobra 2005 Apple manambara ny fanolorana ny anarana hoe "Zavatra Iray hafa.." ny fandefasana ny iPod taranaka fahadimy, izay manana ny fahafahana hilalao fampahalalam-baovao antontan-taratasy ny karazana MPEG4 sy H. 264 amin'ny fanapahan-kevitra ny 480 x 480 ary 320 x 240. Ny vaovao iPod dia hita ao roa modely, miaraka amin'ny fahafahana ny 30 Gb sy 60 Gb.
Ny varavarana lamba dia manana fanapahan-kevitra ny 320 x 240, afaka maneho 65,536 loko, sy ny afaka hilalao indray ny lahatsary na sary ao amin'ny fahitalavitra iray amin'ny alalan'ny AV tariby izay dia mifandray ny connector ny headset ary ahitana misaraka telegrama nandritra ny feo sy ny sary. Ny varavarana lamba dia ny lafiny 2.5", izany hoe ny antsasaky mirefy lehibe kokoa noho ny teo aloha. Ny iPod dia 30% thinner noho ny teo aloha.
H ny fiainana bateria dia 14 20 ny ora, ny modely 30 Gb sy 60 Gb tsirairay avy, raha ny fijerena horonan-tsary mampihena ny faharetan'ny amin'ny 2 tany ny voalohany ary amin'ny 3 ora ny faharoa.
Ny famolavolana ny tsindrio kodiarana dia iray ihany izany, fa dia kely noho ny teo aloha. Ny antony fa izany no, izay Apple nitsahatra ny ho powered by ny Synaptics ary tsy mamokatra afa-tsy ny iray amin'ireo tsindrio kodiarana.
Ny headphone socket efa nifindra avy ny afovoany, ny ilany ankavanana, raha mihazona ny bokotra nifindra tany amin'ny ilany havia. Avy amin'ny iPod 'ity taranaka ity dia tsy hita ny faladiany eo amin'ny fanaraha-maso lavitra, izay midika fa ny fitaovana ampiasaina amin' izany connector tsy miasa amin'ny iPod ity. Koa tsy misy intsony nanohana ny rakitra famindrana amin'ny alalan'ny firewire, saingy dia mbola misy foana ny mety hisian'ny-poana amin'ny alalan'ny izany.
Toy ny iPod nano avy amin'ny loko roa, fotsy sy mainty, ary misy ny fampiharana stopwatch sy ny lamba fanakonana ny hidin-trano. Koa, ny famantaranandro fampiharana dia nanavao sy manohana ny mpanondro, multi-zone serum tamin'ny izany fotoana izany. Eo amin'ny fonony misy raharaha, izay dia vokatry ny fitarainana ny saro-pady ambonin'ny iPod nano.
Malaza hafa ny fiovana dia ny fanafoanana ny tabataba, toy ny feon'ny mafy ny fiara, izay nitsoka ny alalan ' ny écouteur, sy ny feo, ny fandraisam-peo tsara, izay vao niakatra ny 44.1 KHz.
Sales[hanova | hanova ny fango]
Ny iPod amin'izao fotoana izao lehibe indrindra-ny fivarotana MP3 player ao amin'ny izao tontolo izao, manana ny tahan'ny 75,6% ny varotra ao Amin'ny.E.A. ary tanteraka ny varotra maherin'ny 60 tapitrisa.Hadisoan-tsiahy: La balise ouvrante <ref> est mal formée ou a un mauvais nom.
Ny lisitry ny ara-teknika fepetra arahana ny iPod
iPodgr.com - grika toerana / vondrom-piarahamonina amin'ireo foto-kevitry ny ny iPod.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=IPod&oldid=795162"
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2017 amin'ny 19:46 ity pejy ity.